Somali News 11.10.21
Published November 11, 2021 at 12:43 PM CST
Toddobaadkii la soo dhaafay, lix dhimasho oo kale ayaa lagu daray tirada guud ee COVID-19 ee dhimashada la xiriirta ee ka dhacday Degmada Woodbury tan iyo markii uu cudurka faafay, 254 guud ahaan. Gobolka oo dhan waxaa jiray 7,166 dhimasho ah.
Ka dib dhowr toddobaad oo hoos u dhaca heerarka togan, 14-ka maalmood ee imtixaanka heerka togan wuxuu kor u kacayaa hal dhibic ilaa heer ku dhawaad 12%.
Cisbitaalada ayaa sidoo kale kor u kacay. Waxaa jira 37 isbitaal oo leh ku dhawaad kala bar la dagaallamaya COVID-19 kaliya. Toddobaadkii hore waxaa jiray 32.
Tirada dadka da'doodu tahay 18 sano iyo ka weyn ee laga tallaalay Degmada Woodbury waxay ku dhow yihiin 64% ilaa 4 boqolkiiba dhibco marka loo eego celceliska gobolka oo wax yar ka badan 68%.
Saraakiisha caafimaadka maxalliga ah ayaa sheegaya in tallaalku weli yahay qalabka ugu wanaagsan ee looga hortago cudurrada halista ah.
Saraakiisha caafimaadka dadweynaha ee gobolka ayaa sheegay in qiyaastii 7-kun oo caruur Iowa ah oo da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 11 ay heleen qiyaaskoodii ugu horreeyay ee tallaalka COVID-19 Isniintii. Qiyaasta daawada Pfizer ee tallaalka ayaa la ansixiyay usbuucii hore, taasoo ka dhigaysa in ka badan 280-kun oo caruur Iowa ah inay u qalmaan in laga tallaalo coronavirus-ga cusub.
Isbahaysi ka kooban toban gobol, oo ay ku jiraan dhammaan saddexda Gobol ee Siouxland, ayaa gudbiyay dacwad ka dhan ah sharci cusub oo uu sameeyay maamulka madaxweyne Joe Biden oo u baahan malaayiin shaqaalaha daryeelka caafimaadka ah in laga tallaalo COVID-19.
Dacwadda Arbacadii laga gudbiyay maxkamadda federaalka ee Missou